Orinasa mpamokatra ranomandry fonosana China Neck | Huanyi
Fonosana ranomandry soroka vozona
Taratasy fanamarihana: REHETRA SGS MSDS FDA CE
Size: 35 * 16cm
Loko: loko namboarina: volomparasy, maitso, mena
Logo: Afaka ampanjifaina
Fahaiza-mamatsy: 200000 Piece / Pieces isam-bolana
Halava samy hafa amin'ny safidinao.
taratasy fanamarinana: SGS MSDS FDA CE REACH
Size:35 * 16cm
Color: Loko namboarina: volomparasy, maitso, mena
Famantarana: Afaka ampanjifaina
Fahaizana manome:200000 Piece / Pieces pe volana
Halava samy hafa amin'ny safidinao. Ny fonosana dia mijanona eo amin'ny toerany rehefa mandeha, mijoro na mipetraka. Mafana na mangatsiaka ny vozona sy soroka afaka manampy anao miala sasatra, mamelombelona ary mamerina amin'ny laoniny ny vatana sy ny fanahinao.
Ahoana ny fomba hanafarana baiko?
1. fankatoavana ohatra.
2.Client dia mametraka petra-bola 30% na LC misokatra aorian'ny nahazoana ny Pl.
3.Nankatoavin'ny mpanjifa ny santionany pp anay, ary raiso ny tatitra momba ny fanandramana raha ilaina izany.
4. Fotoana famokarana
5. Araho ny fandefasana.
6.Spplier mandamina antontan-taratasy ilaina ary mandefa kopia amin'ireto antontan-taratasy ireto..Fandanjana mandanjalanja ny vokan'ny mpanjifa ..
7.Supplier mandefa antontan-taratasy tany am-boalohany na telex famoahana ny entana.
8. Fiantohana ara-pahasalamana mandritra ny 60 andro aorian'ny fandefasana.
Previous: Fonosana ranomandry misy tady
Manaraka: Kitapo gilasy hemorozida
Fonosana ranomandry tsara indrindra sy soroka tsara indrindra
Kitapo gilasy ho an'ny fanaintainan'ny hatoka sy ny soroka
Kitapo gilasy ho an'ny fanaintainan'ny hatoka
Fonony mampitony vozona